Semalt Expert: Ahoana ny fomba fitahirizana mivantana an-tsokosoko amin'ny fifanakalozan-kevitra?
Ny fototra niavian'ny transaktions-e-Mails dia ny fifantenana. Ny varotra mivarotra sy ny fivarotana dia ny Marketingstrategien, izay manatsara ny fivoarana sy ny fihazonana. Ny lehibe indrindra dia ny fifanakalozan-kevitra, ny lehibe indrindra dia ny ROI - fascinator sydney. Ireo paikady ireo dia afaka manome anao bebe kokoa, raha hanome fanampiana fanampiny.
Oliver King, tompon'andraikitra amin'ny Success Successor von Semalt Digital Services, manome toro-lalana izay hanampy anao hampiasa fitaovana maimaim-poana amin'ny e-mail.
Teo ny Devoly dia nivarotra sy nivarotra
Raha toa ka manolotra ny mpanjifa mitovitovy aminy na ny vokatra samihafa ny orinasa, dia miteny amin'ny olona avy amin'ny fivarotam-bola. Raha mividy solosaina finday iray sy ohatr'izany, ohatra, ianao, z. B. Maus, Flash-Disks ary fitaovana hafa afaka miaraka amin'ny vokatrareo. Tsy misy afa-tsy ny fampahafantarana ny mpanjifa momba ny vokatra azo avy amin'ny vokatra. Azo atao tsara ny mampihetsi-po amin'ny fitondrantenan'ny Fahalalana momba ny Fahalalana.
Any an-toeran-kafa dia manangona toe-javatra iray raha toa ka misy mpividy iray entina hahazo fananana hafa. Ny tanjona dia ny hoe ny mpanjifa dia mandany vola bebe kokoa noho izay efa nomaniny. Im Computerkaufszenario wird dem Kunden ein Computer mit besserer Funktion angeboten als die zuvor ausgewählten mit einem höheren Preis. Ny maty dia matetika mahomby, raha toa ka mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy..Ireo teknika roa ireo dia tsy maintsy ampiasaina raha toa ka mahatsikaritra ny mpanjifa mba hahazoany ny fahafaham-pony.
Raha niakatra ny varotra dia tokony arotsaka ireto manaraka ireto:
Biete Sie Ihre meistverkauften Produkte an
Biete die am meisten bewerteten Produkte an
Manomeza ireo vokatra ireo, izay mifototra amin'ny lojika mifandraika amin'ny mpanjifa anao.
Fifanakalozam-bola mivantana sy mivarotra am-bala-E-mail
Ny fifanakalozana mivantana sy ny fivarotana dia tena zava-dehibe, raha toa ka tafiditra ao amin'ny Trans-e-mails izy ireo, kanefa moa ve tsy tokony handany vola be ianao? Ny fikarohana dia maneho fa ny fifindra-monim-pirenena rehetra
Raha mividy amin'ny aterineto dia mazàna ny mpanjifa dia mahazo ny fahazoan-dàlana ahazoan-dàlana hahazoana antoka ny fampiroboroboana ny fivarotana sy ny fifanakalozam-bola. Mitombo ny faharesen-dahatra, ny vidin'ny vola ho an'ny orinasa indray. Ny mpividy dia tsy maintsy mitsidika ny tranokalany, raha toa ka manana tombontsoa lehibe izy ireo.
Auftragsbestätigungen und Versandbestätigungen eignen sich für die Bearbeitung von Up-Selling- und Cross-Selling-Angeboten durch Bereitstellung von aussagekräftigen Bildern und zugehörigen Produkten oder Dienstleistungen. Amin'ny alalan'ny testversion maimaim-poana ho an'ny orinasa vaovao na ny orinasanao dia afaka mitombo koa ny fahafaha-manatsara ny fivoaran'ny orinasa.
Ny "Danke" E-Mails dia iray hafa ahafahana manangona ny fahafahana hanangona mivantana ny fivarotana mivarotra mivantana sy ny fivarotana, izay matetika tsy mahafa-po.
Fotodrafitrasa fandefasana mailaka
Manantena ny mpanjifa mitsidika ny tranonkala ary mamokatra ny vokatra, saingy arotsaka noho ny antony. Ny maty dia hery lehibe afaka mandefa ny e-mails mba handefasana ny mpivarotra, mba hamporisihana sy hanomezana baiko ny mpividy, hanafoanana ny fividianana. Azonao atao ny mamporisika ny mpividy mba hampiasana ny fivarotana an-tsokosoko sy ny fifanakalozam-bola.
Fifanakalozam-bola amin'ny fivarotana mena
Mifidiana ny fotoana mety indrindra mba handefasana ny hetsika
Mijanona ho manan-danja
Manao bebe kokoa noho ny Sales
Add a new content to enhance your company's trustworthiness.
Ampiasao ny tompon'andraikitra ny mpanjifa
Tandremo ny vidin'ny ny vokatra - Ireo tolotra dia tokony ho ny karama mitovy ho an'ny vokatra izay nividy ny mpanjifa
Fampiasana A / B-Test
Instagram sy ny ho avy
Ny fifanakalozam-barotra sy ny fividianana dia fomba fiasa mahery vaika mba hampitomboana ny isan'ny fivarotana sy hahazoana vokatra bebe kokoa. Ny fampiharana dia mila manokana fahalalana fanampiny momba ny E-Mail-Marketing sy Content-Development. Ireo fomba roa ireo dia miorim-paka amin'ny fomba mahazatra ny fomba fiasa mahomby amin'ny orinasa.